nemo, Author at Myannewsmedia - Page2of 15
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တုန်းက ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေရဲ့အကြားမှာ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ “Parasite” ရုပ်ရှင်ဟာဆိုရင် အော်စကာဆုများစွာကိုသိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ခဲ့ပြီး ဇာတ်ကားထဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ဇာတ်ကားကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Bong Joon Ho ဟာဆိုရင်လည်း နိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေရဲ့ ချီးကျူးအသိအမှတ်ပြုမှုတွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ […]
လက်ရှိအောင်မြင်ကြိုက်များလျှက်ရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတွေများစွာထဲမှာဆိုရင် အခုတင်ဆက်ဖော်ပြပေးမယ့် မင်းသမီး (၅) လက်ကတော့ အနုပညာကြေးအမြင့်ဆုံးသော မင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့….. 5. Bella Ranee “Buppesunnivas“ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက် အောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်လာခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Bella Ranee ဟာဆိုရင် […]
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Mew Nittha ကိုတော့ မြန်မာပရိသတ်တွေက “My Husband In Law” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက “မေ” ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ ရင်းနှီးကြပြီးဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Mew ဟာ သရုပ်ဆောင်လောကထဲကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်တုန်းက […]
ထိုင်းဒရမ်မာကြိုက်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ Thai TV3 ရုပ်သံလိုင်းကို ကောင်းကောင်းကြီးရင်းနှီးကြပြီး၊ သိထားကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်ထိုင်းသရုပ်ဆောင်အများစုဟာဆိုရင် ဒီရုပ်သံလိုင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုလက်တွဲထားကြတာဖြစ်ပြီး အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းဟာဆိုရင်လည်း လစဉ်တိုင်းမှာ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်တွေများစွာကို ထုတ်လွှင့်ပြသလျှက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာတော့ စတင်ပွဲထွက်လာစဉ်အချိန်ကတည်းကနေ ဒီနေ့အထိထက်တိုင် Thai TV3 နဲ့လက်တွဲလာကြတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင် […]
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Jung Il Woo ဟာဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက ထုတ်လွှင့်ပြသပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ‘Haechi’ ရှေးခေတ်နောက်ခံဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်ခဲ့အပြီး နောက်ထပ်ရှေးခေတ်နောက်ခံဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်မှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာကနေပါဝင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ မနေ့တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Ilgan Sports သတင်းဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင် […]
၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမနှစ်ဝက်အတွက် Google မှာ အရှာဖွေခံရဆုံး ကိုရီးယားအနုပညာရှင်ကတော့ နာမည်ကြီးကိုရီးယားအမျိုးသားအဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Jungkook ဖြစ်ပြီး အခုပြီးခဲ့တဲ့ ၂၈ ရက်နေ့တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင် သူဟာ ၂၀၂၀ ပထမနှစ်ဝက်ရဲ့ […]
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးအဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ 2NE1 ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သူ Gong Minzy ဟာဆိုရင် NYLON မဂ္ဂဇင်းရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပရိသတ်တွေအရမ်းသိချင်နေကြတဲ့ သူမတို့အဖွဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းကြမယ့် အခြေအနေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖွင့်ဟပြောပြလို့သွားခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ နှစ်တုန်းက 2NE1 ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်စတင်ပွဲထွက်ခဲ့တဲ့ Minzy ဟာ […]
အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းလိင်တူကြိုက်နှစ်သက်မှုကြောင့် ဖျက်သိမ်းခဲ့ရတဲ့ K-pop အဖွဲ့
လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ နီးပါးပတ်ဝန်းကျင် ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလလောက်တုန်းက K’pop လို့အမည်ရပြီး အဖွဲ့ဝင်ငါးယောက်ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသားအဆိုတော်တစ်ဖွဲ့ဟာ စတင်ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ Donghwa, Jumin, Youngwon, Yoobin နဲ့ Woohyun တို့ဖြစ်ကြပြီး သူတို့ရဲ့ပွဲဦးထွက်သီချင်းဟာဆိုရင်လည်း […]
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အနုပညာလောကမှာ အရှုပ်တော်ပုံပြဿနာတွေကြောင့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရပ်နားပြီး ဖျော်ဖြေရေးနယ်ပယ်ထဲကနေ ထွက်ခွာသွားဖို့အတွက် တွန်းအားပေးခံခဲ့ရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဆိုတာရှိပါတယ်။ အခုတင်ဆက်ဖော်ပြပေးချင်တာတော့ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ပြဿနာတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သတ်နေခဲ့တာကြောင့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို အချိန်တစ်ခုမျှရပ်နားခဲ့ကြရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့… 1. Oh Hyun Kyung မင်းသမီး Oh Hyun […]
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးအဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BLACKPINK ရဲ့”How You Like That” သီချင်းအသစ်ဟာဆိုရင် လက်ရှိအချိန်မှာ MelOn, Genie, Bugs နဲ့အစရှိတဲ့ ကိုရီးယားတေးဂီတဇယား ရဲ့နံပါတ်တစ်နေရာမှာတည်ရှိနေပြီး အောင်မြင်မှုတွေရနေတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသီချင်းဟာဆိုရင် အခုပြီးခဲ့တဲ့ ၂၆ ရက်နေ့တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး […]